Public Health in Myanmar: HIV Sexual transmission လိင်ကတဆင့် HIV ကူးစက်ခြင်း
kyaw san said...
လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရောဂါကူးမကူး သိချင်လို့ ပါ။ comdom သုံးပေမယ့်ယောကျားမှာ ပွေးတို့ ဝဲတို့ ပေါနေမယ်ဆိုရင် မိန်းမမှာရာသိလာနေရင် ကုးနိုင်လားသိချင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရောဂါကူးမကူး သိချင်လို့ ပါ။ comdom သုံးပေမယ့်ယောကျားအင်ဂါဝန်းကျင်မှာ ပွေးတို့ ဝဲတို့ ပေါနေမယ်ဆိုရင် မိန်းမမှာရာသိလာနေရင် ကုးနိုင်လားသိချင်ပါတယ်။
Condom သုံးတာက ကျားလိင်တံကိုသာ ဖုံးတာမို့၊ ကျားကနေမ၊ မကနေကျား STDs တွေကို မကူးစေနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဖုံးမထားတဲ့ နေရာတွေမျာ STDs မဟုတ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေရင်တော့ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ ပွေး၊ ၀ဲ၊ ကြွက်နို့၊ ရေယုံ။
အမျိုးသမီးမှာ ရာသီလာနေတာကြောင့် ထူးပြီး ရောဂါ ကူးတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရာသီလာနေတယ်ဆိုတာ သူ့သားအ်ိအ်အထဲက အတွင်းဆုံးအလွှာ ပျက်စီးလို့ ထွက်ကျလာနေတဲ့ သွေးသာဖြစ်တယ်။ ဒီအချိန်မို့ ရောဂါ ထူးပြီး ကူးစရာ မရှိပါ။
ှDr.Tint Swe ခင်ဗျား . STDs ကို ကျွန်တော်နာမလည်လို့ ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်. ဒီမေးခွန်းလေးကိုပဲထပ်ပြီး ပိုနားလည်အောင်ထပ်ရှင်းပြစေလိုပါတယ် Dr.Tint Swe ခင်ဗျား. ဆက်ဆံတဲ့ မိန်းခလေးကရာသီလာနေမယ်.ဆက်ဆံတဲ့ ယောကျားလေးက comdom သုံးပေမယ့်ကွန်ဒွမ် မဖုံးတဲ့ နေရာ ( ဥပမာ- ဝှေးစေ့ .ဆီးဆပ်) တို့ မှာ ပွေး.၀ဲး ညင်း တို့ ပေါက်နေမယ်ဆိုရင် ကုးနိင် မလား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ပါတယ်
Dr. Tint Swe ခင်ဗျား